Haydarpaşa Train Station Train, Akụkọ ihe owuwu yana Haydar Baba Tomb | RayHaber | Zọ okporo ụzọ | Okporo ụzọ | cable ụgbọ ala
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulHaydarpaşa Train Station Train, Akụkọ ihe owuwu yana Haydar Baba Tomb
21 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 Istanbul, ụgbọ okporo ígwè, Foto, General, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey 1
haydarpasa ọdụ akụkọ akụkọ ụlọ na Haydar Baba Turbesi
E wuru ọdụ ụgbọ oloko Haydarpaşa na 1906 II. Ọ malitere n'oge ọchịchị nke Abdulhamid ma rụchaa ya na 1908. Ọdụ, nke ụlọ ọrụ German wuru, na III. Akpọrọ ya aha Haydar Pasha, otu n'ime pashas nke Selim. Ewere nzube nke owuwu a dị ka mmalite nke ụzọ ụgbọ okporo ígwè Istanbul Baghdad. N'ime oge ikpeazụ nke Alaeze Ottoman, a malitere ọrụ ụgbọ okporo ígwè Hicaz. State Railways nke Republic of Turkey bụ isi ojii. Ọ na-enwekwa ebe dị mkpa na njem ụgbọ elu n'obodo ụgbọ elu.
Emere Haydarpaşa Station, 30 May 1906 afọ II. Oge Abdulhamid malitere. Ewu nke ọdụ ahụ bidoro na 1906, 19 ka emechara na August 1908 ma meghee maka ọrụ. Haydarpaşa Railway Station, nke ụlọ ọrụ German a na-akpọ Anadolu Bağdat wuru, dị na akụrụngwa maka ibupute na ibido ngwa ahịa ngwongwo ndị dị n'ụgbọ mmiri ndị na-esite na Anatolia ma ọ bụ na-aga Anatolia.
Ihe oru a bu nke Helmuth Cuno na Otto Ritter doziri, wee bie ndu ndi Italy na ndi German okwute n’oge amuma a. Akụkụ dị ukwuu nke ọdụ ahụ mebiri n'ihi nnukwu ọkụ na 1917. Mgbe mbibi a gasị, eweghachila ya n'ụdị ọ dị ugbu a. Na 1979, nsonaazụ nke ikuku ọkụ kpatara mmebi nke iko butere ihe n'ihi mgbawa nke ụgbọ mmiri na-adaba na ọdụ ụgbọ mmiri dị na Haydarpaşa. 28 N’ọnwa Nọvemba 2010, n’ihi nnukwu ọkụ n’elu ụlọ nke Haydarpaşa Railway Station, elu ụlọ ọdụ ahụ mebiri emebi ma ala nke anọ nke ụlọ ahụ ghọrọ ihe a na-adịghị ahụkebe.
Stationlọ ọrụ ahụ, ebe ọtụtụ ndị mmadụ na-aga Istanbul ma zute ọmarịcha ala ahụ, bụ n'ezie ihe atụ doro anya banyere ihe owuwu ndị German. Site na anya nnụnụ na-ahụ maka ụlọ ahụ, otu ụkwụ dị ogologo, ukwu nke ọzọ abụrụ obere "U" ahụ N'ime ụlọ ahụ, n'ụkwụ ndị a dị mkpụmkpụ ma dị ogologo, enwere ụlọ nwere nnukwu ụlọ elu.
Alakụba abụọ nke “U” ahụ warawara ụlọ ebe ụlọ ahụ dị dị na mpaghara ala. Ogige dị n'ime bụ ogige dị n'ime. A na-ewu ụlọ ahụ n’elu otu puku osisi 21 abụọ, nke ọ bụla n’ime ha bụ mita 100. Ejiri teknụzụ mee ihe na mbụ nke 1900 afọ, hama. Ihe dị mkpa ụlọ ahụ na-agbago n’elu ikpo ahịhịa a na-etinye n’elu ikpo ndị a.
Buildinglọ ọdụ ụlọ ọrụ siri ike ma enwere obere mbibi ọbụladị na ala ọma jijiji. A na-eji osisi na ‘steepụ ụlọ dị elu ụlọ ahụ rụọ ụlọ, ụdị nke a na-ejikarị emezi ụlọ mgbe ochie ndị Jamanị.
Ọkụ na gbawara agbawa na ọdụ Haydarpaşa
Ikekwe otu n'ime ncheta kachasị dị oke egwu ma ọ bụ nwute na akụkọ ihe mere eme nke Haydarpaşa Railway Station bụ 6 Septemba Sabot nke onye ntorobịa Britain mere na 1917. N'ihi amamịghe ndị Britain mere ka a na-eburu egbe mgboagha n'ụgbọ ọgbụgba na-eche Garda na cranes; mgboagha gbawara n'ụzọ ụgbọ oloko echekwara n'ụlọ ahụ, na-eche n'ọdụ ọdụ ahụ ma na-achọ ịbanye n'ọdụ ọdụ ahụ, ọkụ na-enwetụbeghị ụdị malitere. Ọtụtụ narị ndị agha nọ n'ụgbọ okporo ígwè ahụ enweta nnukwu mmebi site na mgbawa a na ọkụ. A gwara ya na windo nke ụlọ dị na Kadıköy na Selimiye mebiri n'ihi ihe ike nke mgbawa ahụ.
15 November Na 1979, onye na-ebu mmanụ mmanụ Romania 'Independanta' gbawara ebe dị nso na windo ụlọ ahụ na iko ụlọ mechiri emechi.
N’elu ụlọ ọdụ ụgbọ oloko Haydarpaşa mere ihe akụkọ, ọkụ nke dara n’elu mmiri nke 28.11.2010 n’oge awa 15.30 bibiela ọkụ n’elu ụlọ ọrụ ahụ. A na-achịkwa 1 n'ime awa ole na ole wee kpochapụ ọkụ ahụ ka a na-ekwu na ọ bụ ya kpatara nrụzigharị ụlọ ahụ.
Ọdụ Ragbọ Mmiri Haydarpaşa
30 May a rụrụ ụlọ arụmarụ abụọ, nke malitere ịmalite na 1906, site n'aka ndị ọrụ ụlọ German abụọ. E wuchara ogige Haydarpaşa Railway na 500 n'ihi afọ abụọ nke ọrụ yana ihe dika mbọ nke Italian stonemason 1908. E si na henke bute ya na nkume di elu a na-acha uhie uhie nke ụlọ a dị ebube, nke mepere na May nke 1908 na May nke 19. Akpọrọ ya aha Haydar Pasha, onye nyere aka na owuwu nke Selimiye Barracks. Sultan III. Selim chere na o kwesịrị ekwesị ịkpọ Haydar Pasha dị ka ihe mmegharị nye Haydar Pasha onye mere ihe karịrị ike ya mgbe ọ na-arụ ụlọ mgbochi ahụ na-aza aha ya. Ka oge na-aga, site na mgbasawanye nke ọdụ ụgbọ okporo ígwè na ọganihu na n'ime ime Anatolia, mkpa nke ọdụ a abawanyelarị. Darlọ ọrụ Haydarpaşa agbasawo ebe mpaghara 3 puku mita 836 n'obosara. Ndị a kacha mara amara na-apụ apụ ebe a bụ; East Express, Fatih Express, Isi obodo Express, Kurtalan Express.
Ime ụlọ na nke dị n'èzí nke Haydarpadara Railway Station
Dargbọ okporo Hayzọ Haydarpaşa nwere ụlọ pụrụ iche, ndị mmadụ amaara na ọtụtụ ihe nkiri Turkey ruo taa, bụ onye gbara ọtụtụ nkwubi okwu na ọtụtụ nkewa ma lelee ọmarịcha nlele nke Istanbul site ebe a. Buildinglọ ahụ nwere ihe atụ gbasara ụlọ ochie ndị Jamanị, sitekwa n'anya nnụnụ otu ụkwụ dị mkpụmkpụ, nke ọzọ dịkwa ogologo. Ya mere, enwere nnukwu ụlọ elu na ụlọ elu. Ihe onyonyo a kọwara ụfọdụ otuto nke Haydarpaşa. N’oge gara aga, ejiri ihe ndị a kpụrụ akpụ rụọ ọrụ na ọrụ nkà chọọ ụlọ ndị a mma, ma emesịa dowe ha. Ugbu a, anyị nwere ike ịhụ naanị akpa ihe osise na-arụ ọrụ n'otu ụlọ. ụlọ; A na-ewu ya n’elu mkpo osisi 21 puku, nke ọ bụla n’ime ya bụ mita 100. Ejiri okwute okwute Lefke-Osmaneli mee ala ụlọ na mezzanine nke ụlọ ahụ. E ji osisi na akụkụ anọ rụọ windo nke ọdụ ahụ, nke nwere ogidi ịchọ mma n'agbata windo ahụ. N'akụkụ ụlọ nke na-eche ihu n'oké osimiri, enwere ụlọ elu okirikiri warara site na isi ruo n’elu ụlọ nke mere na nsọtụ ụlọ ahụ dakọtara.
Haydopa Haya Raveway Station Weghachi
6 na Haydarpaşa Station September 1917 na 15 November 1979 bụ ndị Gọvanọ rụzigharịrị arụmọrụ okporo ụzọ ụgbọ oloko mgbe ihe mgbawa abụọ na ọkụ ọgbụgba abụọ dị na ya, na ọnọdụ e debere ya n'ụdị ochie ya ma nwee ụdị nke kacha nso na steeti ya ugbu a site n'ime nhazi dị iche iche. Kemgbe mmeghe nke ọdụ ahụ, 1908 ahụla mmiri ozuzo, idei mmiri na mbibi akwụna n'ihi ọrụ nke steamers, ihe ịchọ mma na ọrụ nka na mpụga nke ụlọ ahụ malitere ịla. 1976 emeela nnukwu mweghachi iji gbochie mmebi ụlọ ahụ. Taa, ọrụ mweghachi na-aga n'ihu.
Mausorol na Haydarpasa Train Station
Mausorol na Haydarpaşa Train Station
Haydar Baba Mausoleum bụ ebe ihe ana - ezighi ezi n ’zọrịtara n’etiti okporo ụzọ dị n’ọdụ ụgbọ okporo ígwè Haydarpaşa. Arụ ụka kemgbe ọtụtụ afọ banyere ili ahụ ụlọ ọrụ ahụ wepụrụ aha ya. Ili ahụ nwere akụkọ dị oke egwu na ọ bụ ọnọdụ ọdịnala. Gee akụkọ banyere ili Haydar Baba. N'oge na-adịghị anya mgbe etinyere ọdụ ahụ n'ọrụ, 100 chọrọ ịgafe okporo ụzọ ụgbọ oloko, ebe ndị isi ọdụ ụgbọ oloko nke mmegharị ahụ dị, wee bido isoro otu. Dabere na akụkọ ndị ahụ; Haydar Pasha, onye nyere aha ọdụ ahụ nrọ nke onye nlekọta, na-abanye abalị. Na Egbenyela m nsogbu, ọ na-agwa onye nlere ya anya. Onye na-ahụ maka ngagharị ahụ na-eso ndị injinia arụ ọrụ, agbanyeghị nrọ a. Na nrọ ya, Haydar Pasha chiri akpịrị ya ma kwuo otu ihe ọzọ. Onye na-ahụ maka ngagharị, nke nrọ a na-emetụta mmụọ na-emetụta, na-akwụsị ọrụ ahụ. Railgbọ okporo ígwè ahụ, nke a na-eme atụmatụ ka emechaa, gafere n’ili ahụ. Ya mere, a ka na-eleta Haydar Baba Tomb taa, site na kewara okporo uzo abuo. Dịka nkọwa zuru oke ma mara mma, a na-ekwu na ndị ọrụ ụgbọ ala na ndị ọrụ ụgbọ oloko ka na-akwụsị ruo taa ma na-ekpe ekpere maka njem ha n'enweghị nsogbu.
The Bitter Akụkọ nke Haydarpaşa ụgbọ oloko! .. 06 / 02 / 2012 Emechiri ihe omume 1 February 2012 na Haydarpa stationa n'ọdụ ụgbọ elu maka afọ 2. Ndị mmadụ hụrụ ncheta ha n'anya. Buildinglọ ọrụ ọdụ a juputara na ncheta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị anyị niile. Maka ọrụ dị oke mma dị ka YHT…
Haydar Akar, Adapazarı-Haydarpasa Ejila ụgbọ okporo ígwè mpaghara 26 / 12 / 2016 Haydar Akar, Adapazarı-Haydarpaşa Regional train line meriri: CHP Kocaeli osote Haydar Akar gara n'ihu na-enwe mkparịta ụka na Iwu Ngwongwo Ngwongwo na TGNA ka ha na-ewere okwu ngbanwe, Adapazarı-Haydarpaşa Regional train line…
Elefuru Ọkụ na Haydarpaşa Train Station | Ọdụ ụgbọ oloko Haydarpasa 10 / 11 / 2012 Elefuru ọkụ na Haydarpa Haya Railway Station: Na ngere nke mbụ banyere ikpe a na ọkụ na Haydarpaşa Railway Station, ndị ọrụ na-erughị eru doziri ihe ncheta mbụ nke ogo mbụ.
Akụkọ banyere Isi iyi Germany na Ọkpụkpụ nke Ọkpụkpụ 10 / 03 / 2014 Akụkọ banyere isi iyi German na Akụkọ ihe mere eme: Mweghachi nke 'Isi iyi German' na Sultanahmet Square na 'Ihe ngosi ehi', otu n'ime akara Kadıköy, nwere ike ime ka anyị mata ọdịiche dị iche iche nke ihe ha chere. Gịnị bụ German Isi iyi Osmanl
Ụlọ akụkọ ihe mere eme na Haydarpaşa ọdụ ụgbọ oloko na-emebi 29 / 09 / 2017 Ọrụ iweghachi na-aga n'ihu na rdlọ Ọrụ rdgbọ Mmiri Hayrdarpaşa. Agbanyeghị, nke a abụghị ikpe maka 10 ụlọ ọrụ akụkọ ihe mere eme na ala. Dabere na ndị ọkachamara, n'ihe banyere mmepe nke ụzọ ụgbọ oloko, a rụziela ụlọ akụkọ ihe mere eme,…
Haydarpaşa Railway Station History, Akụkọ Ewu na Haydar Baba Tomb - Sistemụ Rail
The Bitter Akụkọ nke Haydarpaşa ụgbọ oloko! ..
Haydar Akar, Adapazarı-Haydarpasa Ejila ụgbọ okporo ígwè mpaghara
Elefuru Ọkụ na Haydarpaşa Train Station | Ọdụ ụgbọ oloko Haydarpasa
Akụkọ banyere Isi iyi Germany na Ọkpụkpụ nke Ọkpụkpụ
Ụlọ akụkọ ihe mere eme na Haydarpaşa ọdụ ụgbọ oloko na-emebi
Haydar Sezen meriri obi maka owuwu nke Kadıköy-Kartal Metro Project Ayrılıkçeşme Station
Ụlọ Haydar Pasha
Njikọta Haydarpaşa, E nyere ya na 300.Haftında Actions
Prime Minista Erdogan na-eme atụmatụ ịkụziri ụgbọala Handuzu Plateau nke Baba Ocagi Guneysu
Taa ke History: February 19 1847 Vienna nnochite Sadik Rifat Pasha, mmepe nke agriculture na arịrịọ na Porte nwere na-enye na kọrọ na ụzọ ụgbọ okporo ígwè ga-mere maka nnyefe nke ngwaahịa na-ahịa.